I-Mary Lynchs Pub & B&B - I-Airbnb
I-Mary Lynchs Pub & B&B
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-John izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
IMary Lynchs Pub itholakala ku-M4 45 miles entshonalanga neDublin, esosebeni lweThe Royal Canal (Exit 13, M4). Wonke amagumbi ane-ensuite futhi uma uzizwa ulambile sisebenza ngokukhethekile ngokudla okumnandi okuphekwe ekhaya.
Lesi sakhiwo esimangalisayo sisukela ngeminyaka yawo-1900s futhi sinobuhle bezwe obudala obufunwa kakhulu esiphithiphithini sanamuhla.
Sikumakhilomitha ayi-6 kuphela ukusuka edolobheni elichumayo laseMullingar, elinezitolo nezindawo zokudlela zesimanje. Uyathanda igalofu, ithenisi, ukubhukuda nokugibela amahhashi, noma ngabe ukhethani ukude nje imizuzu eyi-15.
Uzothola ubungane kanye craic endlini. Kuneseshini yendabuko yomculo ngoMgqibelo wesibili nowesine enyangeni.